Eo ihany koa ny fahaiza-mifehy ny vola miditra ateraky ny fanondranana sy ny vola mivoaka atao amin’ny fanafarana mba hifanahantsahana hatrany. Izany no atao mba tsy hidirana amin’ny fitrosana be (surendettement) izay tsy ahafahana manao fifanakalozana iraisam-pirenena (cessation de paiement extérieur). Ny sehatra tsy miankina ihany anefa no tena hitarafana ny vola miditra raha ny eto Madagasikara kanefa tsy manao fandraharahana mihitsy izy ireo rehefa tsy marin-toerana ny Ariary. Rehefa misy io tsy fahamarinan-toerana io dia tsy mitondra tombony ny vola nampiasaina ary tonga amin’ny fisondrotam-bidim-piainana avy hatrany. Izany no antom-pisian’ny Banky Foibe izay miezaka manamarin-toerana ny vola ahafahana manao fandraharahana hanatsara ny toekarena. Rehefa izay dia voatazona amin’ny tokony ho izy ny tahan’ny sondro-bidim-piainana ary rehefa matanjaka ny Ariary dia midina ho azy ny mety ho tanjaky ny vola vahiny ka mety amin’ny toekarena. Ankoatra izay, ny tsena ihany no hamaritra saingy tsy maintsy imasoana io fahamarinan-toeran’ny vola io.